ကြေညာချက်များ – Page3– NMDC
အမှတ် (၂၇၃/၂၇၉)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးပညာဌာန
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖွံ့ ဖြိုးရေး ဌာန
စီမံခန့် ခွဲရေးဌာနများ
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့် ခွဲမှုပညာ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့် ခွဲမှုဆိုင်ရာပညာ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ သတင်းအတတ်ပညာ၊ စတုတ္တွနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ လေ့လာရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ တောင်ကြီး၊ အင်းလေး၊ ပင်းတယဒေသသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂၈ ဦး၊ ဆရာ၊ဆရာမ ၇ ဦးတို့ လိုက်ပါခဲ့ပြီး တောင်ကြီး၊ အင်းလေး၊ ပင်းတယ ဒေသ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသည့်နေရာများ၊ အင်းလေးကန်၊ ဘုရားစေတီများသို့ သွားရောက်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၊ ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် စီးပွားရေးအခြေအနေ အကြောင်းအရာများကို [...]
Monday December 25th, 2017 By PlanetCreator News and Events Comments Off
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် NCRC Hall တွင် (၂၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့၌ International Youth Enlightenment Campus 2017 သို့တက်ရောက်ခဲ့သော စေတနာလုပ်အားရှင် ဂုဏ်ပြုပွဲ နှင့် အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့မှုအား မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Thursday December 21st, 2017 By PlanetCreator News Comments Off
၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင်နှစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးပညာရပ်ဘာသာရပ်၏ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား
၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင်နှစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးပညာရပ်ဘာသာရပ်၏ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကို (၂၇-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် NCRC Hall ၌ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာတင်တင်ထွေးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးပညာဌာနမှ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) ဒေါက်တာသင်းသင်းမြင့်က ဆုံးမသြဝါဒ စကားပြောကြားပြီး သင်တန်းရေးရာဌာနမှ လက်ထောက်မော်ကွန်းထိန်း ဒေါက်တာတင်မောင်ဦးက ကျောင်းစည်းကမ်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို ပြောကြားပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးပညာရပ်ဘာသာရပ် EC အဖွဲ့မှ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားမှ ပထမနှစ်တက်ရောက်လာသည့် ညီငယ်၊ ညီမငယ်များအား မိမိ၏အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေပြောကြားပါသည်။ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအရာထမ်းများနှင့် ကျောင်းသား၊ [...]
Friday January 27th, 2017 By PlanetCreator News Comments Off
သတင်းအတတ်ပညာ စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ သတင်းရိုက်ကူးရေး assignment
အသက်(၁၈)နှစ်အောက် တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးအသင်း လူရွေးချယ်ပွဲ
(English) ”University Contestants invitation for ESC- States & Regions Startup Competition”
(English) This is the news video assignment of Journalism final year students. Saturday March 2nd, 2019
This is news video assignment of Journalism final year students. Saturday March 2nd, 2019
သတင်းအတတ်ပညာ စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ သတင်းရိုက်ကူးရေး assignment Saturday March 2nd, 2019
အသက်(၁၈)နှစ်အောက် တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးအသင်း လူရွေးချယ်ပွဲ Friday January 18th, 2019
(English) “University Contestants invitation for ESC- States & Regions Startup Competition” Wednesday January 2nd, 2019
The Yangon Steps 2019 Friday December 28th, 2018